Air ticket – CB Points
Points များဖြင့် လေကြောင်းလက်မှတ်များထုတ်ရန်
CB Bank ၏ လေကြောင်းလက်မှတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ပူးပေါင်းပါဝင်သော လေကြောင်းလိုင်းများမှာ Thai Airways, Bangkok Airways, Air China, Cathay Dragon, Malaysia Airline, Myanmar Airways International နှင့် Singapore Airline တို့ဖြစ်သည်။
CB reward points team +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ အားခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် လက်ဆောင်ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းအား ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လေကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ယူရန် သင်၏ရမှတ်များကို ၁၀၀% အသုံးပြုပြီး လဲလှယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် သင်၏ရမှတ် နှင့် ကဒ် ပေါင်းစပ်ပြီး ငွေပေးချေကာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လေကြောင်းလက်မှတ်၏ ဈေးနှုန်းမှာ ဈေးကွက်ဈေးနှုန်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဈေးနှုန်းတူညီမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကဒ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းအား ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ကဒ်ဖြင့် ပေးချေရန် ကျန်ရှိသောငွေပမာဏကို သင်၏ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းတွင် CB Bank မှ နှုတ်ယူမည်ကို ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
After you submit the completed redemption information to the CB reward points team, CB Bank will verify your data. If there are no errors, the CB reward points team will send the completed redemption letter to you with an electronic Airline E-ticket , which you can present at the check in counter per the Airline process.
အကယ်၍ အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါက system မှမှားယွင်းနေသည်ဖြစ်ပြီး cbpoints@blm-mm.com သို့ အီးမေလ်း ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြား
လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပါက Summit ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပြီးသော ရမှတ်များကို ရေတွက်ပြီးလျှင် ၂၄ နာရီအတွင်း အီလ်းမေး သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ပြန်လည်အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။